Somaliland oo hub iyo gaadiid ku soo daabushay Tukaraq & horjoogayaasha Sool oo ku hanjabay inay soo xirayaan xuduudka Yoocada.
October 24, 2020 Xuseen 19
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukaraq ayaa sheegaya in halkaasi la geeyey ciidamo horleh iyo gaadiid dagaal oo laga soo daad gureeyey deegaamada durugsan ee Somaliland.
Goob joogayaal ayaa u sheegay Puntlandtimes in maalmihii la soo dhaafay ay arkayeen baabuurta xambaarta Taangiyada dagaalka oo ku xeroonaysa saldhigyada ciidamada Somaliland ayna sideen Kaarayaal iyo gaadiidka dagaalka.
Inkastoo aysan Somaliland weli si rasmi ah uga hadlin dhaqdhaqaaqyada socda haddana maamulka gobolka Sool ee fadhigiisu yahay Laascaanood ayaa sheegay inay soo xiri doonaan xuduudaha Somaliland kahor doorashooyinka soo fool leh.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo dhowaan socdaal kuyimid Burco ayaa dib u laabtay waxaana qorshaysan safaro uu ku tegi doono deegaamo katirsan gobolada Bari gaar ahaan Sool iyo Sanaag.
Wixii la doono halasoo dhoobo tukaraq puntland waxaa
Madax ka ah nin aan cidna u naxayn, meeshii gacan u
Qaadana qiiq kaga kiciya, waa laysu joogaaye aragaanee.
Guul iyo gobanimo pl cadawga puntland wuu jabayaa insha allaah guul iyo gobanimo pl
Hadey marka xabadu bilaamato inay dib u caraar punland oranayaan bow ciidamaa bari laga sugayaa mar walba dib u soo gurta ala puntland fuleysanaa 20kii sano ay dhisneyd waxaan maqlayey puntland meel laga qabsadey puntland baa furinka bax dey ciidamo puntland baa baqdin darteed cisbitaalo loo dhigey miyaaney ka fiicneyn hadaad caqli leedihiin inaad hada yoocada dabadeeda iska sii fadhiisataan oo iskaba sii baneysaan iley koley carar baad gaoowe ku geleysaane kkkkkkkkkkkkkk
Waar sirtan iga hooya dhabayacooy. Anagoon xabbad ridin baanu xuduudaheenii soo xidhanayoo Faroole iyo Dani xididnimaanu u soo marnay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Iga walaaney far u dhaqaajin karin midhkaa iga qora aniga hadii kale bac madow baa maryaha loogu gurayaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Ceesh calaa naagaha sheekh Isxaaq Budhleyn bay xiniinyaha qabteen kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Xidid baan nahay kulahaa, khayaaliga isku maaweeli,
Somaliland sadex weerar ayay Soo qaaday intii dani joogey
Siiba sanaag wixii ka dhacayna waa la ogaa. Adeer nimaan
Cidna u naxayn ayaa meeshaas haysta,
DADKA qaar halkaan wax ku qoraya waa xoolo. Puntland dhul ey leedahay iiiidor iyo faracii ma soo haweysan karo….iiidoor waxuu aadi waayey buuhoodlo. Kooxdan LAASCAANOOD waa xooolo iyagaa dhulkoodii XARASHTEY.
Ari boowe waa argagaxney kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
somalilang ilaa 2007 ayay bugland aka somaliland copy eryaneysay dibna aaney u guran maalin kaliya, boowe khiyaaliga iyo cayaarta mandaqada ka daaya oo isku dirka iyo fidnada ka weynaada
Geedkaas daar ayaan ka dhinac dhisanayaa insha allaah.
Iidoor sheeda ay wadaan Puntland way fahansantahay waxay doonayaan inay Hartiga isku laayaan khaasatan dhulbahantaha, Iidoor futo iyo awood uu sool ku joogo maleh bin adam Illah abuuray oo ka fulaysni ma jiro, waxa kaliya ay sameeyaan waa in wiilal jaamac siyaad iyo bah ararsame ah lacag yar u qoraan soona hubeeyaan si ay dhanka nigaasha iyo Ugaaryahan dhulkooda ugu duulaan isuguna laayaan. Ma jiro hal Askari oo iidoo ah oo aadcadeeya dhaafaa anigaa jooga Laascaano xog ogaalna u ah. Waxa laysku gubaayo waa Harti Puntland waa ogsoontahay mana doonayso in dhulbahante isku madho. Waxaa xusid mudan dagaal kii 2018 kii wixii ku dhanka Iidoor ka waxay ahaayeen dhulbahante oo aan cidi wehelin. Puntland haday Iidoor gacan u qaado walahi in Hargaysa laga qaxi lahaa oo xarshin lagu laabanlahaa iyo Ethiopia. Garowe ayay joogaan kuwii hooyooyinkiin Hargaysa ku fuuli jiray oo aad qarowdaan narkaad Tv yada ka aragtaan. Gen Morgan haku khsbina in marlabaad Hargaysa looga niikiyo. History repeats itself Iidoorow calaacal kiinu waa dhow yahay waana la waxeeyay iyo oohinta masii foga. Sideedana fulaygu waligii waxka booto iyo fag fag badan markii lays galana Xarshin iyo Daroor kama sokeeyo. Cashirkii hore waxba kumaydinaan qaadan Iidoor dabanaarufow waxaadna u xiisteen xeryihii qaxootiga ee Ethiopia.
Abdinuur Isaaq Manu sool deganeyn caynsba oog. Iyo gawsaweyne
kkkkk meesha waxbaa ka dhacay. ninka @Abdinur la dhaho sxb afkaaga caana lagu qabey idoorkaan waashey abaalkooda baad marisay sxb geesi geesi dhalay. war kuwinaan wagaashle suldan @Boodhari magiciisa u dhaafa doofaaro yahow maxaa meel kasta magiciisa ugu wasakheeneysaan. kabahiisaa gaari weydeen waxa uga daba waalateen kkkkk kkkkk ciilka u dhinta duf ku baxooyin. u dhiga magiciisa sharafta leh.
Caalamka meel kasta oo dagaal ka dhaco ciidanka ku guulaystay dagaalkaa hal arin ayaa lagu sugaa/cadeeyaa/ogaadaa oo ah; Ciidankee laga kiciyay goobaha/dhulka ay ku sugnaayeen? Taariikhdu waxay ina bartay in 20 sano ee ina dhaafay in ciidanka Somaliland dhul Puntland sheegato ay la wareegaan. Ma dafiri kartid xaqiiqdaa.kkk
Dhinaca kale guuldrada dagaalada aad Somaliland la gashaan waxaad qiil uga dhigtay in ciidan Dhulbahante ee degaanka dagaalka idinla galay!!! Feker-kaagaa hadaan kuu raaco waxaad cadaysay in dadka dega gobolka Sool aanay ka raali ahayn inaad sheegato dhulkooda, kana mid yihiin Jamhuuriyada Barakaysan ee Somaliland. kkk
Gunaanad , ha u malayn ciidanka Somaliland inay la midyihiin ciidan beeleedka Puntland. Ciidanka Somaliland waa ciidan dhisan, isku dhafan hal hadaf oo keliyana sugida nabada dalka Somaliland. Markaa kii adkaa-daba ciidankaas Jamhuuriyada Somaliland ayuu calankeeda & ciideeda difaacayaa.
Waxaa yaab leh dad wali , Xabaaashii Siyaad bare, Afweyne dul fadhiya , u haysta in uu ahaa Nebi qof wanaagsan…Yaaaab
mar hore ayaaan sheegay, adigu GUS iidoor ayaad rabtaa.
Guska ugu ugu weyn . Ciidanka Somalland ee jooga Tukaraq ayaa haya hsalakaa ka doono, macaaaan..
Guska ugu weyn, Ciidanka Qaranka Somaliand ayaa leh, halkaa ka doono.
Jimcaale , waa naag jecel, GUSKA , iidoorka .